Iicawa Nemali: Ngubani Onokumthemba?
Ngaba Uyazithemba Iinkonzo Emalini?
UYonela * wayekhuthelele ukuhamba icawa kunye nabantwana
bakhe. Uthi: “Ndaxelela umfundisi ukuba ndifuna ukufunda ngeBhayibhile.” Kodwa akazange amfundise. Ekuhambeni kwexesha wayeka ukuya enkonzweni. Uqhubeka esithi: “Ndabhalelwa ileta yicawa, isithi ukuba andikwazi kuphumelela, mandithumele nje okwemali. Ndabona ukuba, ‘abanayo tu inkathalo bafuna nje imali yam.’”
UAsanda olirhamente elivunyiweyo uthi: “Ecaweni babehambisa isitya senkongozelo kathathu, kwaye befuna sigalele imali qho sidlula. Eyona nto babeyishumayela yimali. Ndaqonda ukuba, ‘abanawo umoya kaThixo.’ ”
Ukuba iicawa ozaziyo zisebenzisa iindlela ezichuliweyo zokufuna imali, ngaba loo nto iyavumelana neemfundiso zeBhayibhile?
UYesu owaqalisa ibandla lamaKristu uthi: “Namkele ngesisa, yiphani ngesisa.” (Mateyu 10:8) Ayikho imali enokuthenga iimfundiso zeBhayibhile, ndlela le ezixabiseke ngayo, ngoko zifanele zifunyanwe ngumntu wonke.
AmaKristu enkulungwane yokuqala ayezibhatala njani iindleko zebandla?
Ngamnye kubo wayekhupha imali “njengoko egqibile entliziyweni yakhe, kungekhona ngokukrokra okanye ngokunyanzelwa, kuba uThixo uthanda umphi ochwayitileyo.” (2 Korinte 9:7) Umpostile uPawulos wathi: “Sasisebenza ubusuku nemini, ukuze singabi luxanduva oluziindleko kuye nabani na wenu, lo gama sasinishumayeza iindaba ezilungileyo.” (1 Tesalonika 2:9) Ukuze akwazi ukuziphilisa aze aqhubeke eshumayela, uPawulos wayengumenzi weentente.—IZenzo 18:2, 3.
AmaNgqina kaYehova ahlanganisana kwizakhiwo ezingenalucedu-cedu ezibizwa ngokuba ziiHolo ZoBukumkani. Azibhatala njani iindleko? Awayenzi inkongozelo, engahambisi neemvulophu ezichaza imali emayikhutshwe. Kodwa nabani na oyixabisayo imfundiso yeBhayibhile ayivayo, unako ukufaka imali kwibhokisi yeminikelo eseHolweni YoBukumkani.
Iindleko zenkonzo zimele zibhatalwe njani?
Eli phephancwadi nalo liziindleko. Kodwa awusoze ubone sicela mali ebantwini okanye sisenza izibhengezo kulo ukuze senze ingeniso. Eyona nto ibalulekileyo ngalo kukufundisa inyaniso eseBhayibhileni.
Ucinga ntoni: Ngaba le ndlela enza ngayo amaNgqina iyafana naleyo ayesenza ngayo amaKristu enkulungwane yokuqala?